Borrasca Miguel: astaamaha, qaab dhismeedka iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 12/04/2021 11:13 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Waxaan ognahay in saadaasha hawadu ay noqon karto mid aan la saadaalin karin maadaama ay tahay natiijada isbedbedelka tiro badan oo doorsoomayaal ah oo badalaya qiimahooda mudo gaaban. Mid ka mid ah natiijooyinka isbedeladan deegaanka ayaa ahaa squall Miguel. Waana markay ahayd bishii Juunyo 2019 cyclogenesis qarxiyay kii ugu xiisaha badnaa uguna yaabka badnaa. Waxay ahayd duufaan qoto dheer waxayna martay geeddi-socodka qalliinka qalliinka ee latitude-yada hoose. Tani waa wax aan horay loo arkin inbadanna waxay ku xireen isbedelka cimilada.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, asalka iyo cawaaqibta duufaantii Miguel.
2 Sababihii duufaanta Miguel
3 Abuuritaanka duufaanta Miguel
4 Gabagabada dhacdadan cajiibka ah
Inta badan khubarada saadaasha hawada iyo saadaaliyayaasha cimilada ma aysan rumaysan waxa nagu soo food leh bilowga Juun 2019. Duufaan qoto dheer ayaa ka socota waqooyiga-galbeed ee Jasiiradda Iberian isla waqtigaas oo ay mari doonto geeddi-socod ah cyclogenesis qarxa. Waa dhacdo aan caadi ahayn oo aan ahayn oo keliya waqtiga sanadka ee ay dhacday, laakiin sidoo kale meelaha fogfog ee jasiiraddeennu ku taal.
Qaab-dhismeedyadan iyo cadaadiska sii xoojinta geeddi-socodka nolosha waxay caan ku yihiin bilaha qaboobaha qabowgooda iyo meelaha sare ama bartamaha Badweynta Atlaantik. Waa in lagu xisaabtamo in samaysanka duufaanadu badanaa dhacaan jiilaalka maaddaama doorsoomayaasha saadaasha hawadu ay tahay inay u qaataan qiimayaal qaarkood inay dhacaan. Waxaan dhihi karnaa xilliga samaynta duufaanta qotoda dheer iyo hababka loo yaqaan 'cyclogenesis' ayaa ah mid aad u firfircoon oo kacsan inta lagu jiro xilliga qaboobaha woqooyiga.
Mararka qaarkood, sameynta duufaano sidoo kale waxay dhici kartaa bilaha guga iyo deyrta, laakiin marar dhif ah xagaaga. Tani waa mid ka mid ah sababaha duufaan Miguel wuxuu ahaa mid aan la saadaalin karin oo xiiso leh. Sababaha ama sababaha duufaannada ugu qoto dheer iyo hababka loo yaqaan 'cyclogenesis' waa kuwo aad u firfircoon oo xoog badan inta lagu jiro xilliyada qaboobaha waqooyiga cidhifyada.
Sababihii duufaanta Miguel
Aan aragno waa maxay waxyaabaha sababay duufaanka Miguel iyo sababta ay u dhacday xilligan oo kale sanadka. Durdurka diyaaradda sare waa wadaha ugu weyn ee duufaannada Atlantikada maaddaama oo ay aad u kacsan tahay oo ka hooseyso dhigga u dhigma ee Waqooyiga Badweynta Atlaantik. Isweydaarsiga kuleylka wuxuu u dhexeeyaa cimilada kuleylka ama kuleylka badan cufnaanta hawo-mareenka qaboobaha ayaa ah tan ugu badan ee lagu sheego bilaha qabow. Waa in lagu xisaabtamo in isweydaarsiga kuleylkan ay weheliyaan xoojinta diyaaradda cirifka ayaa sababa saameyn aad u weyn oo niyadjab leh oo soo saarta duufaan weyn.
Khasaaraha labaad ee ka soo kordha aaggan kuleylka kulul wuxuu xoogaa ka badan yahay inta lagu jiro bilaha jiilaalka. Tani waxay sidoo kale keentaa in heer kulku kala duwanaan karo. Cunsurka kale ee suurtagalka ah ee duufaanta Miguel waa soo saarista hawo qabow oo badiyaa la xiriirta meelaha ay ka soo galaan diyaaraddaha culus waxayna qaadi karaan mowjado gundhig u noqon kara habsami u socodka sameynta cadaadiska hoose iyo cyclogenesis
Waxaa jira arrimo kale oo labaad oo u roonaan kara hannaanka cyclogenesis xilliga qaboobaha, in kasta oo aysan muhiimad weyn u lahayn kiiskan. Cyclogenesis waa sameynta duufaanno badanaa sababa hoos u dhac ku yimaada cadaadiska jawiga. Markii aan ka hadlayno cyclogenesis qarxa, waxaan tixraaceynaa hoos u dhac arxan daran oo ku yimid cadaadiska jawiga taasoo keentay in duufaan xoog leh la abuuro. Labada cyclogenesis iyo qulqulka diyaaradda ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee horumarka, dayactirka iyo sii qoto dheer ee duufaanka.
Abuuritaanka duufaanta Miguel
Duufaantan waxaa la sameeyay iyada oo ay joogaan jiritaanka maaddooyinka caadiga ah ee cyclogenesis iyo qoto-dheeraanta degdegga ah. Ugu badnaan dherer dabayl, diyaaradda dabaysha iyo hoos u dhac ku yimid heerarka hoose waxay ku yaalliin aag ka mid ah farqiga u dhexeeya kuleylka, oo loo yaqaan aagga baroclinic ee lakabyada hoose.
Bilowga Juun waxaa la arki karaa in qulqulka diyaaradda uu aad u kacsan yahay oo latitude uu hoos u dhacay. Dhinaca kale, qarxinta qabow ee la xiriirta sidoo kale waa mid aad u calaamadeysan oo ka soo horjeedda hawo diirimaad horay u jirtay oo ay ugu wacan tahay anticyclone aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn. Natiijada waxaas oo dhami waa kordhinta kuleylka kuleylka ee ka hooseeya dhidibka diyaaradda. Taasi waa, baroclinity xoog leh. Dugsiga sare ee lakabyada hoose ee aagga xoog kuleyliyaha kuleylka ah ayaa ah midka ay maraan habka loo yaqaan 'cyclogenesis'.
Xaaladdaan oo dhan waxay ahayd mid aan caadi ahayn qaabkeeda iyo xooggeeda. Sababtaas awgeed, isku-darka 'Miguel' waa mid dhif ah. Si tan loo sameeyo, khariidadaha anomaly ee caadiga ah ayaa la muujiyay oo ina tusaya heerka aan caadiga ahayn ee qulqulka diyaaraddu soo bandhigi karo iyo xooggiisa. Diyaaraddu waa halyeeyada ugu weyn ee xaaladdan oo dhan. Tani waa sababta oo ah haddii diyaaraddu ay si xoog leh uga timaaddo heerarka ugu sarreeya, iyadoo ku socota latitude hoose ayay ku dhici kartaa xawaaraha dabaysha oo gaadhaysa 150-200 km / saacaddii. Sidoo kale caadi ma ahayn hawo dambe oo qabow oo hogaamisa diyaarada cirifka taasna waxay ka dhigtay baroclin-ka xitaa aaggii duufaanta Miguel laga sameeyay.
Gabagabada dhacdadan cajiibka ah
Squall Miguel wuxuu ahaa dhacdo naadir ah oo ku reebtay saadaaliyayaasha iyo saadaaliyayaasha dhadhan yaab leh afkooda. Waxaan dhihi karnaa sameynta iyo sii qoto dheeraanta soo degitaanku waa cunsurro naadir ah marka la eego horudhacayaasha laakiin sidoo kale waa ku yar yihiin xilliga noocan oo kale ah. Waxaa la soo gabagabeeyay inuu aad u kacsanaa oo keliya aag baroclinic ah oo ku yaal lakabyada ugu hooseeya ee goobta iyo taariikhda aan joognay.
Sababahan oo dhan waxay ka dhigeen duufaanta Miguel inay taariikhda ku gasho mid ka mid ah kuwa ugu dhifka yar tan iyo markii aan hayno diiwaanka saadaasha hawada. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto duufaanta Miguel, astaamaheeda iyo qaabkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Squall Miguel
Ayax Ayax Ma xakamayn karaa?